Ngwa kachasị mma iji kpọọ oku olu | Gam akporosis
Na Fraịdee, bekee bekee ọzọ, mgbe imeghe sava WhatsApp ọzọ maka ime ka ndị niile mara nke ọma ma tụ anya ya, WhatsApp olu oku. Naanị awa 24 ka e mesịrị, e mechiri sava ọrụ ahụ ọzọ, ọzọkwa ka ndị ọrụ niile chere ka ha rụọ ọrụ ọzọ iji nwee ike ịnụ ụtọ nke a ọrụ nkwukọrịta olu ogologo oge maka netwọkụ.
Na post nke taa, m ga-akwado ya ngwa atọ kachasị amasị m maka ịkpọ oku kpam kpam na freentanetị. Applicationsfọdụ ngwa na n'ezie ọtụtụ n'ime unu maara ma wụnye na gam akporo ọnụ gị, na ị na-adịghị ọbụna mara na ha na ha nwekwara ike kpọọ oku VoIP, ọbụlagodi dị elu karịa na oku olu WhatsApp ama ama.
1 Ngwa m kachasị amasị m maka ịkpọ oku na ịntanetị
2 Nke mbu - Facebook Messenger
3 Nke abuo - Google Hangouts
4 3rd - WhatsApp
Ngwa m kachasị amasị m maka ịkpọ oku na ịntanetị
Nke mbu - Facebook Messenger
Otu n'ime ihe kpatara Facebook iji kpughee nkata ya mara ama site na ngwa Facebook iji nweta ozi, bụ iji nye ngwa ngwa ozi ọhụụ na atụmatụ ọhụụ nke anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ụdị ya jikọtara na Facebook.
Site Onye ozi Facebook anyị ga-enwe ike ịkpọ oku ọ bụla na onye ọrụ ọ bụla nke usoro Facebook anyị na-enweghị mkpa ka ha tinye ngwa ahụ. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na oku ndị a bụ ndị na-eri obere data na, ọ dịkarịa ala na ule m rụrụ, ndị na-enye mma kachasị mma ma na oku site na Wi-Fi na oku site na njikọ ahụ 3G 0 4G data.
Nke abuo - Google Hangouts
Gọlọ Google ma ọ bụ ochie Google Gtalk, ọ bụ na-enweghị obi abụọ m abụọ ọkacha mmasị ngwa maka ịkpọ oku olu n’ freentanet n’efu. Ngwa nke na-esochi Messenger na usoro nke ụda dị mma, na ọbụlagodi na-enye anyị ike iji kpọọ oku vidiyo nwere nnukwu onyogho na ogo dị mma.
N'adịghị ka Facebook Messenger, a ga-etinye Hangouts na njedebe nke kọntaktị anyị chọrọ ịkpọ, ọ bụ ezie na nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị anyị nwere ike ịchọta, ebe ọ bụ na ọ bụ ngwa Google, Nke a emeworị ka arụnyere dị ka ọkọlọtọ n'ọtụtụ gam akporo ọnụ, ya mere, ọ gaghị esiri ike ịchọta na ndị enyi gị na-eji ngwa ahụ.
3rd - WhatsApp
N'ọnọdụ nke atọ ma dị anya site na ngwa ndị ọzọ m chọrọ ịkọrọ ebe a, anyị hụrụ onwe anyị WhatsApp maka gam akporo nke na-adịworị nwayọọ nwayọọ na-etinye arụmọrụ nke oku olu n'etiti ndị ọrụ nke ngwa ngwa ozi ngwa ngwa kachasị ewu ewu. A ọhụrụ arụmọrụ, nke site na mma Wi-Fi njikọ ọ na-ada enweghị ntụpọ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ejiri ya site na data data ọ na-amaliteworị ịda ada ọtụtụ.
Buru n’uche nke ahụ ngwa a ka no na beta betaBeta dị mma, ee, mana ọ ka ga-akawanye mma ọ ga - eme ya na izu na - abịa.
Banyere ngwa dika Line, Amaara m na ọtụtụ n'ime gị ndị ọrụ a tụkwasịrị obi agaghị aghọta na ọ bụghị n'etiti atọ mbụ nke ndepụta m, ma ọ bụ ngwa dị ka Viber. Isi ihe mere na anaghị etinye ha na ndepụta a bụ na ngwa abụọ ahụ anaghị amasị ndị kọntaktị m, yabụ, ebe ọ bụ na enweghị ike ịchọta ha, ọ baghị uru itinye ngwa abụọ a. Banyere Line, e nwekwara ike majeure ihe kpatara nke ya ezigbo igbapu na m android batrị, nke m nwere ike nyochaa na gam akporo niile nke m tinyechara ngwa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Ngwa kachasị atọ m nwere maka ịkpọ oku n'thentanet
Ndi BBM ?? Maka m oku kachasị doo anya yana obere data enwere ike ịme, onye ị chọghị ịkpọ gị, ihe dị mkpa karịa ịnwe ike ịme ya.
mmnko 2016 dijo
Ngwa ọ bụla bụ SIP na gam akporo (ma ọ bụ IOS) (ị nwere ndepụta nwere njikọ na
http://www.955170000.com Ngalaba SIP VoIP) dị mma. Lracha ndị ọzọ
Ndị ọrụ protocol SIP, ọbụlagodi na ha na-eji ngwa ndị ọzọ dị iche na nke anyị
ọ dịghị anyị mkpa ịdebanye aha na ndị na-eweta ọrụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkpọ ọnlaịnụ (n'efu) ndị ọrụ netwọkụ ndị ọzọ dịka
- Gtalk nke na-eji usoro XMPP eme ihe ma ọ bụ kpọọ akara ala na ekwentị,
anyị ga-achọ ịdebanye aha na onye na-eweta ọrụ.
A na-anwale gam akporo 5.1.1 n'ọtụtụ Nexus 5
Google na ọgwụgwọ ya nke ndị mmepe you nọ na egwu ziri ezi?